Afrika, 20 December 2018
Khamiis 20 December 2018
Xaaladda magaalada Mooyaale oo deggan
Bandhigyo dhaqameed lagu qabtay W/Bari Kenya
Shirkii Heritage ee Djibouti oo lasoo geba gebeeyey
Magaalada Djibouti waxaa maanta lagu soo geba gebeeyey Madasha Aragtiwadaagga Soomaalida, oo uu soo qaban-qaabisay machadka daraasaddaka siyaasadda ee Heritage.
Muslimiinta Kenya oo Wada Olole Tirokoobka 2019-ka
Gobollada ay u badan yihiin dadka Muslimiinta ah ee dalka Kenya waxa ka socda olole ay siyaasiyinta laga soo doortaa wadaan oo ku aadan sidii ay iskugu diyaarin lahaayeen tirokoob la sheegay in dalka Kenya laga qabanayo sanadka foodda inagu soo haya ee 2019-ka.
Nigeria: UNICEF oo Xayiraadda Laga Qaaday
Militariga Nigeria ayaa xayiraaddii ka qaaday dhaq dhaqaaqyada hay’adda UNICEF ee woqooyigga bari ee dalkaasi saacado ka dib markii ay hakisay howlaha hay’adda oo ay ku eedeeyeen inay u basaaseyso falaalada islaamiyiinta ah ee ku sugan gobolka aan dagganayn.
Wareysi: Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Somaliland
Wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo oo booqasho ku jooga Maraykanka ayaa VOA uga warramay ujeedada safarkooda.
Angola: Soomaali ka cabaneysa sharci la'aan
Angola ayaa markii hore dadka waxaa sharciyada lagu siinayey hanaanka qaxootiga, laakiinse dowlada Angola oo hadda soo galootiga Soomaalida ay ka mid tahay ku wargalisey in loo baahanyahay in baasaboor sharci lagu siiyo.
Kaaliyaha Xog. A. Dibadda Mareykanka ee Afrika oo Jabuuti Booqdey
Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Maraykanka u qaabilsan Afrika Tibor P. Nagy oo ku jira safar uu ku marayo waddamo ka tirsan qaaradda Afrika ayaa ku sugan dalka Jabuuti.
Madaxda ONLF oo Jigjiga Tagey
Wafdiga Admiral Maxamed Cumar Cusmaan iyo hoggaanka jabhadda ONLF ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada, waxaana ay ka qaybgaleen isku soo bax ka dhacay garoon ku yaalla Jigjiga.